Kwado kuki iji zụọ ahịa ịzụ ahịa
Ntuziaka pụrụ iche maka onye ahịa
Ụtụ gụnyere. Mbupu gbakọọ na checkout.
Ibu mbupu n'efu na Italy & SLOVENIA. Ọnụ ego nkwụnye ụgwọ 9,0 EUR FLAT niile na EU EU. ANY D B D USA NA UK D AS KA.
search Banye cart
Ọnụọgụ nke ụgbọ gị: 0
Ọnụahịa ụgbọ ala € 0.00
Mmanya mmeri Frescobaldi dị na Tuscany na Italytali. Azụmaahịa ezinụlọ nke na-amịpụta mmanya dị oke mma maka ọtụtụ ọgbọ. Na mkpokọta ezinụlọ nwere ihe karịrị ubi vaịn 7 na Tuscany. E wezụga Castello Nippozzano a ma ama na Tenuta Castiglioni, ezinụlọ ahụ nwekwara Castello Pomino, Rèmole, Tenuta Perano, Castel Giocondo na Tenuta Ammiraglia.
Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke mmanya Castello Nipozzano, 35 kilomita n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Florence. Ọ bụ mmanya ochie si Tuscany: vasatail na a doro anya ụjọ agwa.
Na 2015 mkpụrụ vaịn ahụ chara acha zuru oke n'ihi ogologo oge, oge ọkọchị na ihu igwe dị mma. Ọ bụzịghị ọkara nke abụọ nke ọnwa Febụwarị ka oge oyi a dị obere belata, nke rụpụtara na osisi vaịn malitere itolite ihe dịka ụbọchị iri gachara. Mmiri malitere n'oge na 10 March. Oge anwụ na-amasịkarị ụbọchị anwụ na-achasi ike, na-etinye mmiri ozuzo nke dị n'okpuru nkezi nke afọ 21 gara aga. Oge ọkọchị, oge mkpụrụ osisi, bụ otu n'ime anwụ kacha anwụ na anwụ n'ime afọ iri gara aga. N’ọnwa Julaị, okpomọkụ dị elu karịa 5 Celsius C ma enweghị mmiri ozuzo. N’izu mbụ nke Ọgọstụ, mmiri ozuzo a nọworo na-eche kemgbe mechara daa. Na mmalite nke oge mgbụsị akwụkwọ, ikuku, agba na isi na-agbanwe n'otu oge na owuwe ihe ubi na Ọktoba.
Ndetu ire ụtọ:
Nipozzano 2016 na-enwu na-acha ọcha na-acha uhie uhie. N'imi ya siri ike ma sie ike. Na mbu, enwere nkpuru ahihia ahihia na nkpuru osisi uhie dika raspberị, blackberry na bluuberi, ihe ndi edeturu na udiri dika tea, nutmeg na kofi. N'ime ọnụ ọ na-ekpughe onwe ya ihe na-ekpo ọkụ, dị nro ma dịkwa ebube, ma mara mma ma na-adọrọ mmasị. A na-ejikọ tannins ya dị nro nke ọma na usoro ahụ. Ọgwụgwụ ahụ dị ogologo ma na-adịgide adịgide.
Mkpụrụ vaịn dị iche iche: Sangiovese, ikike ndị akwadoro ikike (Malvasia nera, Colorino, Merlot, Cabernet Sauvignon).
Fermentation: nchara igwe anaghị agba nchara.
Mmanya na-arinụ: 15-18 Celsius C.
Mmanya a na-aga nke ọma na anụ uhie uhie, anụ atụrụ na chiiz.
Enweghị ike ịkwado nnweta nnweta
Strada nke Lazzaretto 2, Muggia, Trieste, 34015, Italy
Onye nyere ikike nkesa nke mmanya
AKWMKWỌ MBỌCH B